In ka badan 300 oo macalimiin ah oo ka qalinjabiyay kulliyada tababarka macalimiinta GTEC - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandIn ka badan 300 oo macalimiin ah oo ka qalinjabiyay kulliyada tababarka macalimiinta GTEC
July 25, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Ardayda qalinjabisay oo wajiyadooda farxad ka muuqato. sawirka: Xafiiska warfaafinta madaxtooyada.
Garoowe-(Puntland Mirror) In kabadan 300 oo macalimiin ah ayaa maanta oo Isniin ah ka qalinjabiyay kulliyada macalimiinta ee Garoowe “GTEC”.
Madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali, wasiirka waxbarashada Puntland Abshir Yuusuf Ciise, xildhibaano iyo marti sharaf kale ayaa ka qaybgashay munaasabada oo lagu qabtay kulliyada GTEC.
Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli oo uu dhinac fadhiyo wasiirka waxbarashada Abshir Physics. Sawirka: Xafiiska warfaafinta madaxtooyada.
Madaxweynaha dawladda Puntland oo munaasabadda qalinjebinta ah khudbad ka jeediyey ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray Maamulka, Macalimiinta, haayadaha caawiya kulliyadda GTEC iyo macalimiinta ka qalinjebiyey kulliyadda tababarka Macalimiinta ee GTEC.
Madaxweynaha ayaa xusay in macalinimadu ay tahay shaqada ugu wanaagsan ee uu qof banii’aadam ahi ka shaqeeyo isla markaana waxaa uu tilmaamay Madaxweynuhu in loo baahan yahay in lasii dar-dargeliyo dedaalka loogu jiro sidii loo soo saari lahaa macalimiin tayo leh oo ka hawl gala Puntland, si ay bulshada reer Puntland uga haqab beesho baahida macalimiinta ee ka jirta.
Kulliyada tababarka Macalimiinta ee GTEC oo kutaala caasimada Puntland, Garoowe, ayaa horey u soo saartay boqolaal macalimiin xirfadlayaal ah kuwaasoo hadda ka shaqeeya xarumaha waxbarashada ee Puntland ka jira.